चाख्ने होइन, अचार? « रिपोर्टर्स नेपाल
चाख्ने होइन, अचार?
इलाम, माघ १९ । जाडोमा खानामा पिरोपिरो अचार कति मीठो हुन्छ है । सब्जी, दाल अनि अचारका साथै, अलिलि अकबरे टोक्दै खाना खानुको मजै बेग्लै हुन्छ नि । अनि भनिन्छ नि, थोरै भए पनि अचारले खानालाई स्वादिष्ट बनाउँछ ।
यो पसल मात्र होइन, अनेक किसिमका अचार यही बनिन्छ । अर्थात अचारको उद्योग नै यही छ । यसका उद्यमी हुन्, चूडामणि रिजाल र सारदा बाँस्कोटा (रिजाल०, जोइपोइ । रिजाल दम्पतीको पसल नयाँ किसिमको होइन, नयाँ तरिकाले गरिएको हो । सामान्य अचार जहाँ पनि पाइन्छ, तर मिश्रित अचारले मन तान्छ, जिब्रो रसाउँछ । पसलमै भेटिएका चूडामणिले भन्नुभयो, “नयाँ भेराइटिजको बनाएको हो । धेरै थोक मिक्स गरेर बनाउँछाँै ।” उहाँले थप्नुभयो, “धेरै दुःख गर्छांैै तर, विकेकै छ ।”